jaamacadaha Medical ee Russia darajada 2016 - jaamacadaha caafimaadka Top
maanta "EducationBro" Magazine diyaariyo darajada 2016 jaamacadaha caafimaadka ee Russia idiin. Waxaan rajaynaynaa in macluumaadkan kaa caawin doona ardayda caalamiga ah ee dooranayaan ugu wanaagsan ee ay waxbarashada caafimaadka ee Russia. koorsooyinka MBBS ee Ruush Federation leeyahay tayo sare leh iyo ujrooyinka hooseeyo.
Waxaan eegayaa fursadaha loogu talogalay darajada (sida ay ukala muhiimsanyihiin degaya):
Reviews ardayda ajnabiga ah oo ku saabsan jaamacadda
Tirada ardayda ajnabiga ah ee jaamacadda
Modern ee dhismaha jaamacadda iyo qalabka
Magaalada halkaasoo jaamacada waxa uu ku yaalaa
Helitaanka bogagga website iyo bulshada. inta jeer ee ay updates.
8. Rostov State University Medical
Halkan waxaa ku qoran lambarka 8 ee ugu fiican jaamacadaha daawo sar ee Russia 2016. waa Rostov State University Medical. Waxaa ka mid ah ardayda ajinebiga ah aad loo jecel yahay. Waxaa dhab ahaan u baahan yahay dhismaha casriga ah iyo website iyo shabakadaha bulshada profiles ay yihiin dhacsan. waxbarashada A wanaagsan ma dabooli karaan wax kasta oo. University waa in ka shaqeeyaan ay image. Si kastaba ha ahaatee, tani waa fiican ah meel wax ka barato medicinу ee Russia ama xataa Europe.
7. Krasnoyarsk State University Medical
No shaki, Krasnoyarsk State University Medical waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu wanaagsan Siberia (Gobolka of Federation Ruush). Waxay leedahay dhibaatooyin la mid ah sida a #7 in our darajayn caafimaadka. Waxaan dhihi karnaa, in jaamacadaha this leeyahay ayaa meel la mid ah in our darajayn. Laakiin qof waa in ay sare. Waxaan go'aansan in KrasSMU waa wax yar ka fiican. Halkaan hoose ka fiiri sanadkan soo socda.
6. Volgograd State University Medical
Volgograd State University Medical ku dhawaad ​​la mid ah sida RSMU (#8) iyo iyo KrasnSMU (#7). jaamacadaha Kuwani ku dhowaad waa isku mid. Xitaa ardayda opinion yihiin kuwo aad u similiar. Sidaas, waxaad dooran kartaa betweent jaamacadaha kuwaas oo, fikirka tusaale ahaan, ku saabsan juqraafi ama cimilada.
5. Novosibirsk State University Medical
Dad badan oo jaamacadaha caafimaadka dalka Ruushka ku taalla Siberia. Dhibaatada waxa ay tahay in ardayda ajinebiga ah ma jeela cimilada Siberian. Laakiin oo dhan ee jaamacadaha kuwanu waa qabow. Sidaas, Novosibirsk University Medical State qaado #5 booska jaamacadaha caafimaadka ugu sareeya ee Russia 2016.
4. Siberian State University Medical
Siberian State University Medical waxa uu leeyahay tayo la mid ah sare ee waxbarashada sida jaamacadaha hore. Laakiin waxa ay leedahay dhismaha more morden iyo qalabka. Website sidoo kale ka fiican yahay. Ardayda ajinebiga jecel yahay jaamacad this, laakiin qaar ka mid ah iyaga ka mid ah ma jecli cimilada ee Siberia aadan. Sidaas awgeed waxa aad dooratay. Anyway, Siberian University Medical State waa on ka mid ah jaamacadaha ugu wanaagsan ee Russia iyo waa #4 in EducationBro saraysiinta jaamacadaha caafimaadka ee Russia 2016.
3. Pavlov First Saint Petersburg State University Medical
Saint Petersburg inta badan ku baaqay in sida caasimada Cultural of Ruush Federation. Oo magaalada this waxay leedahay tiro wayn ee jaamacadaha weyn. Pavlov First Saint Petersburg State University Medical waa mid ka mid ah jaamacadaha kuwaas oo. Ardayda ajinebiga oo wuu jecel yahay. Waxay leedahay qalab casri ah oo ku sugnaa garoonka magaalada qurux badan oo leh lambarka weyn ee meelaha xiiso leh. Tayada waxbarashada sidoo kale waa heer sare ah. SPSMU waa doorasho wanaagsan.
2. Ruush Research University Medical Qaranka
Ku dhawaad ​​ugu horeysay ee. yar A kuma filna inay ku guuleystaan. Laakiin meel kasta oo naga darajayn – tani waa natiijo aad u fiican. Qancinaya Ruush Research University Medical Qaranka #2 in darajayn ee jaamacadaha caafimaadka ugu fiican ee Russia. Ardayda ajinebiga oo wuu jecel yahay. Waxaa ku yaalla Moscow, caasimadda ah ee Ruush Federation. Weligaa dareemi doontaa caajis magaaladan. RNRMU waa meesha aad u fiican inaad wax ka barato daawada ee Russia.
1. First Moscow State University Medical
Halkan waa jaamacadda ugu wanaagsan ee caafimaad ee Russia. Waa meesha ugu fiican inaad wax ka barato MBBS ama dadka kale ee Federation Ruush. Waa mid ka mid ah ugu fiican adduunka. waa First Moscow State University Medical. Waa natiijo ka mid ah “EducationBro saraysiinta jaamacadaha caafimaadka ee Russia 2016”. MSMU qaadataa #1.